Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2746 - 2747 | XperimentalHamid
Funda Isahluko 2746 - 2747 yenoveli Indodana kaMillionaire eMthethweni by INkosi Leaf mahhala online.
Ngakho-ke, wacishe wabona ngokushesha ukuthi kunenkinga ngomzimba ongaphezulu we-und3rwear.
Wayebuye azibuze enhliziyweni yakhe: "Yini le ingaka izinga lezimpahla azithengile ziphansi kakhulu?"
Kepha akufanele. Noma ikhwalithi ingeyinhle, ikakhulukazi isuswe entanjeni. Asikho isizathu sokuphuka.
Okuthi kungenzeka kwenzeke ngokuzumayo emqondweni kaCharlie, futhi wethuka.
Wabheka uMelba ngokunganakile futhi ngokuzumayo wathola ukuthi ijika lomzimba wakhe ongaphezulu elisongwe engutsheni lalibonakala liqhuma kancane ngokuphazima kweso.
“Kungenzeka yini ukuthi kungenxa yakhe wathenga usayizi omncane kakhulu kuye?
UCharlie wavele wazi ngezinkinga ezibalulekile.
Wathenga le ngubo, lena amamodeli wesiko aphezulu, isibalo esibaluleke kakhulu.
Kepha ukuyibuka manje, kusobala ukuthi inamagquma,
okusho ukuthi isibalo sikaMelba empeleni besingacabangi kakhulu, futhi besivele sifihliwe ngaphambili.
Hlanganisa nomsindo ongahambi kahle manje
UCharlie wafuna ngokushesha ukuqonda ukuthi kwenzekeni, futhi naye waba namahloni.
Wathenga ngomusa izingubo zabanye abantu zangaphakathi nezangaphandle. Wayefuna ukwenza izinto zibe lula kuye, kepha manje sekwenzile
akugcinanga ngokubangela izinkinga eziningi kodwa futhi kubangele namahloni amakhulu kangako.
Okulandelayo, kufanele baye endaweni yokudlela ukuyodla. Angeke avele adedele uMelba ahambe kanjena.
Ecabanga ngalokhu, uCharlie wahefuzela futhi wacabanga ngaphakathi: “Hheyi, ngenze okuthile okungalungile, kodwa kufanele ngithole indlela yokuzitholela ngedwa.
Ngakho-ke, akazange akhombise ebusweni bakhe. “Imoto yami ime ngezansi. Ake siqale siye ehhotela. Nginebhizinisi lami. Kungabambezeleka cishe imizuzu eyishumi. Ngiphinde ngihluphe uMalume noMelba ukungilinda ehhotela isikhashana. ”
UPollard wamomotheka wathi: “Akunandaba, ungavele uzixakekise ngokwakho, uma kukhona onakho. Anginakilasi ntambama, ngakho angikhathazeki.
UMelba eceleni, ngoba wayenamahloni ngokweqile ngalesi sikhathi, futhi wayegcwele imicabango yokuthi uzokwenzenjani ngokulandelayo, ngakho-ke akezwanga ukuthi uCharlie wayekhuluma ngani.
Manje ufuna ukuthola isizathu sokuhoxa kuqala, bese eshesha ethenga imvunulo yangaphansi efanelekayo ukuyishintsha.
Kodwa washintsha umqondo: “Angikwazi ukusho lutho ukuthi ngihambe ngedwa. Ngemuva kwakho konke, nginesimo esinamahloni emzimbeni wami. Uma othile eyibona lapho ngithatha itekisi noma ngithenga okuthile, bekungeke yini kube yihlazo, ngizokhuluma noCharlie kuqala. Asiye esidlweni sakusihlwa nobaba. Ngemuva kokudla, buyela ekhaya nobaba. Lapho ngifika ekhaya, ngizokhipha ucezu olwephukile ngenaliti nentambo, bese ngiphuma ngiyothenga entsha.
Ecabanga ngalokhu, uhamba ngemuva kwabo ngokwesaba namehlo ngasikhathi sinye. Akakwazanga ukuzibamba. Wayebukeka kwesobunxele nangakwesokudla, ngenxa yokwesaba ukutholwa abanye ngalesi sikhathi.
Ngenhlanhla, osolwazi namalungu obuhlakani esikoleni babeyodla emini, ngakho-ke abahlangananga nabanye abantu endleleni. UMelba ugcine ephefumulele phezulu esihlalweni esingemuva emotweni.
UCharlie wayekhathazekile ngokukhokhela iphutha lakhe, ngakho-ke washayela ngenkathi ebheka izinxanxathela zezitolo eziseduze ukubona ukuthi ikhona yini indawo efanelekile, ukuze uMelba athole isethi entsha.
Lapho esezofika eClassical Mansion, ekugcineni wabona inxanxathela yezitolo ephelele eduze nayo. Emabhodini amakhulu amakhulu esangweni lezitolo, bekunophawu lwezimpahla zabesifazane ezingaphansi kwezingubo zangaphansi, abone ukuthi uzolile.
Ngalesi sikhathi, uMelba naye ubone leli bhodi, wahluleka ukukhala ekhala buthule: “Uma bengingacabanga ngalo njengomuntu onamandla amakhulu ebhayisikobho, ngithumele kulesi sitolo ngokungazelelwe, thenga esilinganayo , uyigqoke bese ubuyela emuva nge-teleport. ”
Lapho nje sekufonelwa, izwi lika-Orvel lafika lathi: “Master! Ithini imiyalelo yakho? ”
UCharlie uthe: “Uqinisile, ngifuna ukumema umngani esidlweni sakusihlwa, ngakho-ke ngifuna ukukubuza mayelana nemini eClassical Mansion. Likhona ibhokisi? ”
U-Orvel uthe ngaphandle kokungabaza: “Mphathi, ungaya ngqo eClassical Mansion. IDiamond Box kade ingasalindelwe izivakashi. Kugcinelwe wena. Ungahamba uhlale noma nini! ”
UCharlie umangele: “Ungakwenzi lokho, ibhokisi lakho ledayimane lithandwa kakhulu uma ungaziphathi izivakashi ezivela ngaphandle, ukulahlekelwa akukuncane!”
U-Orvel wamomotheka futhi washo ngokungathi sína: “Mphathi, impilo ka-Orvel iyona kuphela oyinikezile, kuthiwani ngebhokisi ledayimane? Inqobo nje uma uyidinga, akunandaba ukuthi yonke iClassical Mansion ngeke ivulekele izivakashi! ”
UCharlie wayazi ukuthi u-Orvel wayethembekile kuye futhi wayezimisele kakhulu ukubuyisa umusa wakhe. Ngokungalindelekile, leli khehla likhathalela kangaka. Akazange aye eClassical Mansion isikhathi eside. Ubelokhu ethule ebhokisa ibhokisi ledayimane, futhi okubaluleke kakhulu, ngaphambi kwalokhu, u-Orvel ubengakasho nelilodwa igama. Ukusho lokho, lokhu kufakazela ukuthi akazange acabange ukusebenzisa lolu hlobo lwento ukumnaka, ukumnxusa, kepha ngokumcabangela.
Ukucabanga ngalokhu, akakwazanga ukuzibamba ukubheka phezulu i-Orvel.
Akunandaba ukuthi u-Orvel akafundanga kangaki, unezinga elijwayelekile lemfundo, kepha uthembekile futhi uphatha kahle izindaba.
Ngakho-ke, wamomotheka wathi ku-Orvel: “Ukugcina ibhokisi ledayimane kwanele. IClassical Mansion kufanele iphathe izivakashi ngendlela ejwayelekile, kungenjalo, izogcwala oweta ngokuzayo, futhi kuzobonakala kulahlekelwa ukuthandwa. ”
U-Orvel washesha wathi: “Kulungile. Mphathi, ngiyaqonda! ”
UCharlie wahlekisa, wabe esebuza: “Uyini kulezi zinsuku?”
U-Orvel uphendule ngenhlonipho wathi: “Muva nje, bengimatasa nokunwetshwa kwekennel. Ucele ukwandisa umhlaba ngaphansi komhlaba, ukuze kube lula kuwe ukuhlela nokuthumela ngokuzayo. ”
"Kulungile." UCharlie uthe ngokweneliseka: “Ngale ndlela, kufanele futhi nize eClassical Mansion manje, futhi ngizokwethulela abangane bami ababili emini. Ngokuzayo, uzodinga ukubanakekela e-Aurous Hill. ”
U-Orvel akazange anqikaze. Uthe: "Kulungile Mphathi, ngizobe sengibiza abantu abaseClassical Mansion, ngihlele idili kuqala, bese ngiphuthuma khona ngokushesha!"
"Kulungile." Ngemuva kokuvala ucingo, uCharlie wathi kuPollard noMelba: “Umngani wami ukuhlelile lokho, asihambe manje.”
UPollard wezwa uCharlie ekhuluma ngegama elithi "Classical Mansion" ocingweni, wahluleka ukuzibamba wabuza: "Charlie, le Mansion Classical ibonakala iyinkantolo yokudla ephezulu yase-Aurous Hill ephethwe ngumuntu ogama lakhe lingu-Orvel."
"Yebo." UCharlie wanqekuzisa ikhanda futhi wamamatheka: “Yi-Orvel. Uma wena noMelba nihlangana naye vele umbize ngalelo gama. ”
UPollard ukhumbuze ngokukhathazeka okuthile: “Charlie, ngizwe ukuthi u-Orvel uyinhloko yomhlaba ongaphansi komhlaba. Kufanele uqaphele lapho uhlangana naye! ”
UCharlie wamoyizela kancane futhi washo ngobuqotho: “Malume, u-Orvel manje ubulungisile ububi, futhi ngeke enze izinto azenza phambilini. Wayejwayele ukuhlukumeza abanye futhi ehlukumeze abantu basemabhizinisini. Akusenjalo."
"Futhi ngaphansi kwethonya lakhe, wonke umhlaba we-Aurous Hill ongaphansi komhlaba. , Bonke sebeqalile ukwenza amabhizinisi abucayi. Manje bonke sebeqala ukusebenza ama-nightclub ejwayelekile, bathengisa iziphuzo ezifanele, bavule izinkampani zonogada, izinkampani zokwakha, ngisho nezinkampani zokwakha. Esikhathini esithile esidlule, baphinde benza ibanga lezimboni zokwakha edolobheni futhi basusa bonke labo abakha ama-mafia ne-sand mafia. Lokhu kudlale imiphumela emihle kakhulu ekuhlaleni kwabantu nasekusebenzeni e-Aurous Hill, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke kakhulu.
UPollard wanqekuzisa ikhanda ecabanga wathi: “Ukukulalele, kubonakala sengathi kunjalo ngempela. I-Aurous Hill ayivamile ukubona imizabalazo eshubile yenzeka muva nje… ”